Nakatona ny Bilaogy Bahrainita Malaza! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Aogositra 2017 15:44 GMT
Efa ofisialy fa hakatona avy hatrany ny bilaogin'i Mahmood (http://mahmood.tv), noho ny baikon'ny Minisiteram-Baovao Bahrainita.
Miaraka amin'ireo tranonkala 6 hafa (notanisaina etsy ambany), nomena ireo mpamatsy tolotra aterineto rehetra ao Bahrain tamin'ny atoandro teo ny fampilazana ofisialy.
Bilaogera Bahrainita/Arabo malaza i Mahmood Al-Yousif. Anisan'ny malaza ao Bahrain ny bilaoginy. Hoy ny vakin'ny lohateny kely ao amin'ny bilaoginy: “Marani-tsaina… manome vaovao… ary mampiala voly!” ary tena izany tokoa. Efa anisan'ny mpanoratra tato amin'ny Global Voices izy. Nanampy betsaka teo amin'ny fitaterana ny tontolon'ny bilaogy Bahrainita ny lahatsoratrany marani-tsaina.
Nanao fanambarana avy hatrany i Mahmood, nahazo antso fanohanana tsy tapaka avy amin'ireo namana manerantany izy. Gazety Bahrainita mpivoaka isan'andro telo fara fahakeliny no niantsafa taminy ary hivoaka rahampitso ao amin'ny Al-Wasat, GDN sy Bahrain Tribune ny vaovao momba azy. Nisy ireo taratasy maromaro nalefa tany amin'ireo ONG mba hanohanana ny fanokafana ny fanakanana ny bilaogin'i Mahmood.
Ora vitsy taorian'ny famoahan'i Mahmood ny fanambarana ofisialy, tapatapaka ny bilaoginy noho ny fahavesaran'ny “bande passante” tsy nampoizina avy amin'ireo mpitsidika sy mpanohana
Ity manaraka ity ny lisitr'ireo tranonkala nahazoana baiko fa akatona tamin'ny filazana ofisialy
Amin'ireo lisitra eo ambony, ny bilaogin'i Mahmood ihany no Bahrainita. Isan-karazany, ahitana vaovao, fivavahana sy fiala-mboly kosa ireo tranonkala hafa.
Matetika, tsy misy ny fanazavana omena ho an'ireo tompon'ny tranonkala mikasika ny antony anakatonana ny tranonkalan'izy ireo. Na izany aza, raha mijery ny filazana ofisialy, manondro ny lalàna faha-47, nolaniana tamin'ny taona 2002 izany, izay nanampy famerana hafa kokoa momba ny fahalalahana maneho hevitra, anisan'izany ny fandraràna ny “fanalam-baraka ny olon'ny mpanjaka sy ny fianakavian'ny mpanjaka.” Tamin'ny 24 Aprily 2005, namoaka didy mampilaza ireo mpandrindra tranonkala sy bilaogy ahitana vaovao momba an'i Bahrain ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao mba hisoratra anarana any amin'ny Minisitera ary handray andraikitra amin'ny votoaty rehetra avoaka an-tserasera.
Tany aloha, nakaton'ny manampahefana ny fidirana amin'ireo tranonkala ara-politika maromaro, anisan'izany ny an'ireo vondrona mpanohitra, satria nilaza ny manam-pahefana fa mitarika “sekta” sy ahitana “votoaty manafintohina” ireo tranonkala ireo. Tsy mazava, na izany aza, ny fepetra nanaovana izany fanapahan-kevitra izany. Amin'ny toe-javatra sasany, nilaza ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao fa ireo tranonkala izay mikasa “hamorona disadisa eo amin'ny olona sy hiteraka fizarazarana” ihany no akaton'izy ireo